Sezvo iwe uchikwanisa kufungidzira kubva pazita, RHA's TrueConnect 2 haisiriyo yekutanga kukwevera kwavo munyika yechokwadi isina waya nzeve. Yaro pekutanga vaviri, iyo yekutanga TrueConnect, zviise pachayo basa rekupa RHA-mhando kurira, ine yakavimbika mazuva ese mashandiro, uye mutengo weti iyo isingazokuvadza homwe yako.
Kwechizvarwa chechipiri pakange pasina shanduko huru dzinotsvaira, asi kuvandudzwa kwakanyanya kwakaitwa kuhupenyu hwebhatiri, zvichiita izvi munzeve kurudziro nyore kune chero munhu anotarisa kushandisa isingashande-kupfuura-mureza mari pane maviri ezevebu izvo hazvikusiye iwe pasi.
Kurera: 6g parutivi rwebeche
IP55 mvura / guruva rinodzivirira
Flip kesi ine USB Type-C yekuchaja
Chimwe chezvinhu isu chataida chaizvo nezve dhizaini yekutanga TrueConnect maearphones yaive dhizaini yenyaya. Inotaridzika uye inonzwa premium, uye inoratidza dhizaini uye yekuvhura mashini ayo ese akasarudzika uye anonakidza.
Kusiyana neruzhinji rwemakesi ekuchaja nzeve, uyu haana muvharo unovhurika kubva kune hinji isina kusimba kuti uburitse mahedhi mukati. Panzvimbo iyoyo, ine chidimbu chimwe chealuminium iyo inoputira yakatenderedza mativi, ine hinji inotsvedzerera padhuze nepazasi. Izvi zvinoita kuti 'muvharo' uve wakasimba, uye uvhure mushe. Iyo matte yakapfava-yekubata kupedzisa pane epurasitiki kesi inowedzera imwe yekuwedzera kubata yekirasi futi.
Kufanana neyekutanga-chizvarwa ine imwechete USB-C doko kune rimwe divi, yaishandiswa kukwidza kumusoro, uye bhatiri chiratidzo cheyero chakagadzirwa nematatu asina kuroorwa ma LED kumberi, iine hunyengeri RHA kunyorera kudivi rimwe chete. Sezvo magadzirirwo emakesi anoenda, zviri nyore asi zvine mutsigo.
Iwo ma earbuds pachawo haana kuchinja zvese zvakanyanya kana. Ivo vanoratidzira imwechete yakapusa kutenderera casing neiyo slim protrusion inonamira kunze kwezasi. Zvakafanana mumafashoni ku Apple's AirPods, asi zvakasiyana kwazvo mukuurayiwa.
Pane bhatani-rinobata-bata bhatani pane ese maRHA nzeve kuti umbomira uye utambe mumhanzi, kana kuvhura mubatsiri wefoni yako kana wabatwa kamwe kana kuti wakadzvanyirirwa-refu. Kupeta-kana-katatu-kurudyi kurudyi 'bud inogadzirisa vhoriyamu, nepo chiito chimwe chete kuruboshwe chakasvetuka chichienda kumashure nekumberi kuburikidza nekwako mutsara.
Zviri nyore kushandisa, uye hazvisi zvese zvine hungwaru, saka hatina kuona kuti zvaitika netsaona chero maficha patanga tichigadzirisa magirazi edu, kana kukwesha bvudzi kuseri kwenzeve.
Iko kukwana kweearbuds kwakanaka uye kunhuwawo zvakare. Hatina kumbobvira tawana iko kusununguka kana kusagadzikana kunzwa mafufu aya akangonamira imomo asina kana kutyisidzira kubuda. Iko kunzwa-munzeve kunzwa kunoreva kuti mushure memaawa mashoma tichiteerera isu taida kupa nzeve dzedu mweya, asi hapana pfungwa yekunzwa canal senitivity kunyangwe mushure mekukwevera aya 'buds kunze.
Chiyero chayo cheyakareruka uye dhizaini yakakodzera, yakasanganiswa neIPX55 mvura- uye guruva rinodzivirira guruva, zvinoreva iro RHA TrueConnect 2 inoshanda zvakanyanya pakupfeka kwemazuva ese.
Maawa 9.5 ekuridza mimhanzi kunze kwemhosva
Maawa makumi matatu nemashanu
Maawa makumi mana nemasere ekushandisa nguva
Bluetooth 5.0 w / 12m huwandu
Pasina mubvunzo chikuru chikonzero chekusarudza RHA's TrueConnect 2 izuva nezuva kuita. Kana zvasvika kune hupenyu hwebhatiri uye isina waya kubatana, izvi zvakasimba sezvaungawana iwe mune yechokwadi isina waya musika.
RHA inoti iwe unogona kutarisira kusvika kuma9.5 maawa emimhanzi kutamba kubva kune yakazara yakazara peya 'mabhudhi, aine mamwe maawa makumi matatu nemashanu anopiwa nenyaya. Ndihwo huwandu hwakatenderedza maawa makumi mana nemana ayo - nechero zviyero - inonakidza.
Mukuyedza kwedu isu hatina kusvika pakuteerera kudzikira kwebhatiri, asi zvaikurudzira kuziva kuti panogona kunge paisazove nemuenzaniso watinofanira kunetseka nezve hupenyu hwebhatiri. Mushure meawa kana zvichingodaro kutenderera kwemimhanzi, chiratidzo chebhatiri muIOS chakangoratidza zana muzana, zvichiratidza kuti hachisi chiratidzo chakarurama zvachose.
Zvinosuruvarisa kuti hapana chirongwa chakatsaurwa chinokutendera kuti utarise hupenyu hwebhatiri zvakanyanya kana kugadzirisa chinowanisa (EQ), saka ndicho chimwe chinhu cheRHA kufunga nezvekuwedzera kune chayo chigadzirwa chinopa.
Nebhatiri rakabatanidzwa rinopihwa neiyo 'buds uye iyo flip kesi, chokwadi ndechekuti isu taigona kuteerera kwemaawa mashoma zuva rega rega kwevhiki rakazara rekushanda, uye zvakadaro nyaya yacho yaisazoda plugging mukati kuti iwedzere kumusoro. Maviri eaya matatu maLED kumberi kwenyaya anga achiri kuvhenekerwa kuratidza kuti paive nemuto wakawanda wakasara.
Saizvozvowo, nemamita gumi nemaviri Bluetooth 12 renji, isu hatina kumbobvira tawana kudonha mukubatana pane chero nzeve, kunyangwe tichienda kumakamuri akati wandei kure nekwaanobva mimhanzi.
Seimwe poindi yekurerukirwa, kana iwe ukazomboda kuisa imwe nzeve kumashure kuitira kuti ubhadhare kumusoro-kumusoro, mimhanzi / odhiyo ichaenderera kuburikidza nezevebud yasara munzeve yako. Ndicho chimwe chinhu chisiri chese TWS nzeve dzinoitwa.
Passive ruzha kuzvitsaura kukwana
Kana paine chinhu chimwe RHA inoziva kuita zvakanaka, zvine mutsindo. Isu takati iyo yepakutanga TrueConnect yaive "imwe yeakanyanya kurira mairi vaviri isu takaedza". Yechipiri-gen ichiri kungonzwika seyakanaka - asi pakave nezvakawanda zvinotyisa zvechokwadi zvisina kuburitswa zvisina waya kubvira, zvinoreva kuti makwikwi mune ino mutengo bracket yapisa.
Iyo TrueConnect 2 inopa yakanaka chiyero chemabhasi, epakati uye anodedera. Iwe hautore pfungwa yekuti mabass ari kutora zvakawandisa, kana kuti pane chero chinoshaikwa mukufamba kana kwenzwi mafambiro. Acoustic gitare inouya kuburikidza chaizvo mushe, ichichengeta matauriro ayo. Bass inodzorwa zvakanaka uye inozivikanwa. Izvo hazviite bhudhi kana ichirira uye isingadonhe kana iyo frequency ichiderera. Iyo inochengetedza chimiro chayo.
Asi kana tiri kunyanyisa kutsoropodza ipapo chimiro chezwi hachina kupenya chaizvo sevamwe mu-nzeve dzatakanzwa. Iyo haina kushomeka zvakadzama, kana kutsauswa kana iine ruzha, ingori zvishoma zvishoma kutetepa kupfuura zvataida.
Ruzha kupatsanurwa kwakanakisa. Uku hakusi kurira ruzha-kudzima - kutaura chokwadi hakudi izvozvo - chinhu chenguva yekungoita. Izvo zvakatifadza isu kuti ruzha rudiki kubva kwakatenderedza kunze runopfuura kupfuura rakanakisa pasiti chisimbiso. Dhizaini yemazano inovimbisa chisimbiso chakachengetedzeka, saka ichivharira chero ruzha rwekunze kuti rwusapinda, zvichinyatsokunyudza mumumhanzi wako.
Bose QuietComfort Earbuds ongororo: mhare-yekudzima shasha
Samsung Galaxy Buds Ongororo Live: Inventive asi inouraya yakakanganisa
Amazon Echo Buds maoko-on wongororo: Nzeve neruzha-kurira Alexa nzeve
Google Pixel Buds (2020) ongororo: Iwo akachenjera kwazvo nzeve dzevose?
Filed Under: famba Tagged With: wireless earbuds